Qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Allbanaadir Media) – Qarax is-miidaamin ah ayaa goordhow ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho, sida ay ilo-wareedyo u xaqiijiyeen Allbanaadir Media.
Wararka ayaa intaas ku daraya inuu jiro khasaare nafeed, balse tirada ramiga ah ayaan weli la hayn. Qaraxa ka dib ayaa waxaa la maqlayay rasaas xooggan oo ay ridayeen ciidamada dowladda.
Isla markii uu qaraxa dhacay waxaa goobta isku geedaamay ciidamada dowladda oo hakiyay isu socodka gadiidka iyo dadka. Goobjoogayaal ka ag dhowaa halka uu qaruxu ka dhacay ayaa sheegay inay arkayeen gawaarida gurmadka deg deg ah oo kusii qulqulaya goobta qaraxa uu ka dhacay.
Allbanaadir Media ayaa toddobaad kahor 12-kii bishan qortay xog aan kasoo xiganay hay’adaha amniga oo sheegeysa in Muqdisho ay soo galeen ugu yaraan 13 qof oo damacsan inay magaalada ka fuliyaan qaraxyo is-miidaamin ah.
Baaritaanada iyo feejignaanta amni ee Muqdisho ayaa aad loo dareemay maalmihii la soo dhaafay.
Tan iyo markii dowladda federaalka ay waddooyinka Muqdisho ku wada goysay dhagxaan, kooxda Al-Shabaab ayaa xeeladdeeda qaraxyada u wareejisay shaqsiyaadka isku xira jaakadaha qarxa, kuwaas oo ay adag tahay in laga hortago, waxaana kadib kordhay qaraxyada is-miidaaminta ah ee magaalada.
Dadka fallanqeeya amniga ayaa dowladda ku eedeeyey inaysan laheyn wax qorshe amni ah oo aan ka aheyn in waddooyinka ku goysay dhagxaan.